downloads 10 523
Mma nke launching ohere shuttles. Abụọ ebupụta ebe-arụsi ọrụ ike. Eme ihe ndị ahụ "họrọ a ụgbọ elu." Pịa Shuttle Launch 06 na-ahọrọ a ụgbọ elu n'okpuru. Abụọ imekotaotuugbo-ebupụta na mgbe ahụ ị ga-eche 12 nkeji tupu ọzọ-onye-amalite. Ọ bụrụ na ya anaghị eme eme, nso na Malitegharịa ekwentị ọzọ FS2004
Ihe dị mkpa: Ozugbo arụnyere na PC gị, enweghị usoro dị mma ịkọwapụta n'ihi na ọ bụ add-on nke Mkpọpụta Mkpọchi 06 (1).
Shuttle Launch 06 (1) ga-arụnyere tupu Shuttle Launch 06 (2).
Mma ụgbọ elu na anya: Ọ bụ na-ekpo ọkụ nke siri ike!